Somaliland oo ka hadashay dagaalka Dharkayn-geenyo
HARGEYSA- Xukuumadda Somaliland, ayaa baaq nabadeed kasoo saartay beelo dagaallo ku dhex mareen deegaanka Dharkeyn geenyo ee gobolka Sool, kuwaas oo dhimasho iyo dhaawac badani ka dhasheen.
Wasiirka warfaafinta Somaliland, Cismaan Cabdilaahi Saxardiid (Caddaani), ayaa sheegay in dad ku dhow labaatan qof ay ku dhinteen dagaalkaasi labada beelood.
Caddaani, ayaa xusay inay u direen ciidan kala dhex gala labada beelood, iyadoo ay gaareen jiidaasi madax dhaqameed fara badan oo ka kala yimid deegaano kala duwan
Wasiirka Caddaani, ayaa sidoo kale warbaahinta u soo gudbiyay qoraal ay soo saartay xukuumadda Somaliland, kaasi oo u dhignaa sidatan:
Baaqa nabadeed ee Wasiirka ayaa u dhignaa sidan
Waxaan jeclahay in aan halkan idiinku soo Gudbiyo xog ku saabsan dhacdadii murugada lahayd ee labadii maalmood ee u dambeeyey ka dhacaysay Degmada Dharkayn-Geeye ee Koonfurta Gobolka Sool, Taasoo Khasaare aan la filayn ka dhex dhashay labo ardaa oo walaalo ah oo ka tirsan bulsho-weynta reer Somaliland , kuwaas oo si kediso ah xabaddu uga dhex bilaabantay iyagoo wada fadhiya, ka dib markii ay isku afgaran waayeen xaajooyin ay ka wada hadlayeen.
Ugu Horrayn aniga oo ku hadlaya afka Dawladda Somaliland Waxaanu tacsi u diraynaa ehelada dadkii halkaa ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmayba iyada oo tirada dadka ku dhintay ay labaatameeyo gaadhayso, tiro kale oo intaa ka badanina ay ku dhaawacantay Dawladda Somaliland waxay qaadday talaabooyinkii lagama maarmaanka ahaa ee ay kaga hawlgeli lahayd mashaqadaas .
Madaxweynaha Somaliland Md Axmed Maxamed maxamuud Siilaanyo markii dhiiladaasi soo gaadhay waxa uu amray in ciidanka Qaranku si degdeg ah u kala dhexgalaan labada dhinac, si loo joojiyo khasaare kale oo sii kordha. Illaa hadana ciidanka Qaranku waxay ku sugan yihiin goobihii waxyeeladu ka dhacday.
Cismaan Cabdilaahi saxardiid (Caddaani) Afhayeenka Xukuumada Somaliland, ahna Wasiirka wasaaradda warfaafinta, dhaqanka iyo wacyigelinta.
Hadalkan ayaa soo baxay xilli maalintii saddexaad dagaal kasocdo deegaanka Dharkayn geenyo oo katirsan gobolka Sool.
​Xiisad ka taagan magaalada Laas-caasno, gobolka Sool
Puntland 28.06.2016. 16:08
LASCANOD- Xaaladda guud ee magaalada Lascaanood, ayaa aad u kacsan, waxana lagu soo rogay Bandow, kadib markii duleedka magaalada ee dhinaca howdka saaka lagu dilay laba nin oo shacab ahaa.
Labada nin ayaa la sheegay in loo dilay aano qabiil, waxaana taasi kee ...
​20 ku dhimatay dagaal maalintii labaad ka dhacay Dharkayn-geenyo, Sool
Puntland 04.06.2016. 23:45